३ सय किलो तौल भएकी महिलाले ४ वर्षमा कसरी घटाइन २१४ किलो तौल ? आखिर केले गर्यो जादु ! – MediaNP
काठमाडौँ । जन्मिदा सामान्य बच्चा जस्तै जन्मिएकी भारतकी ४२ वर्षिय अमिता राजानीको उमेर बढ्दै गएपछि शरिरको तौल पनि दिनदिनै बढ्दै गयो । निरन्तर बढ्दै गएको तौलले उनको शरिरमा समस्या पनि थपिदै गयो ताकी उनलाई हिडडुल गर्न समेत कठिन अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि निरन्तर तौल घटाउने प्रयासमा लागेकी राजानीले ४ वर्षको अन्तरालमा ठूलो मेहनत गरेर ३०० किलो तौल घटाइन् । अहिले उनी मात्र ८६ किलो रहेकी छन् ।
असामान्य तरिकाले बढेको तौलले उनलाई निकै तनाव भयो जबकी उनी १६ वर्षको हुँदा नै १२६ किलो भएकी थिइन् । उनी अरुको शरिरर आफ्नो शरिरको तुलना गरेर निकै पछुतो मान्ने गथिइन् । तौल घटाउने प्रयासमा निरन्तर लागेकी उनले कयौँ अस्पताल धाइन तर समस्या समाधान नभएपछि लीलावती अस्पताल र हिंदुजा हेल्थकेयर सर्जिकल अस्पतालमा कार्यरत डा . शशांक शाहले अमितालाई मार्बिड ओबेसिटीको समस्या भएको बताए ।
यो सँगै उनलाई अन्य थुप्रै रोगहरु लागेको थियो । अत्याधिक मटोपनको कारण मोलेस्टेरोल, मधुमेह, निमोनिया, मृगौलासम्बन्धी रोग, मानसिक तनाव जस्ता थुप्रै समस्याहरु भएका थिए । उनको तौल घटाउनको लागि २ पटक सर्जरी गरियो । २ पटक गरिएको सर्जरीपछि उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार भयो । दोस्रो पटक गरिएको सर्जरीमाउनलाई ग्यास्ट्रिक बाइपास गराइएको थियो ।
त्यतिबेला उनको तौल ३०० केजी बाट घटेर १४० पुगेको थियो । यो अवस्थासम्म आउनको लागि उनको शरिरमा कयौ पटक सर्जरी गरियो भने उनी निरन्तर व्यायाम गर्नमा लागिरहिन् । अहिले उनको तौल घटेर ८६ किलोमा आएको छ ।